> Resource > Top List > Top 5 lagu bedelan karo MOBILedit
MOBILedit , codsiga synching telefoonka gacanta iyada oo PC, waxaa loo arkaa sida ay iyagana dhaawac ah app-dunida sababta oo ah kacaankii waxay soo geliyeen nidaamka furan. Tan iyo markii ay si fudud u taageeri karaa kasta brand ka Android inay macruufka iyo telefoonada gacanta ee caadiga ah iyo fududeeyaa OS boosaska badan ka Symbian iyo Android inay Windows Mobile iyo Blackberry, sidaas darteed, waa mid aad loo jecel ka mid ah dadka isticmaala. Dhibaatada waxa ay tahay in aysan xor ah iyo inay isticmaalaan hawlihiisa anfacaya aad u baahan tahay si ay u qaataan $ 25. Tani waxay hubaal ka biyodiiday ee app MOBILedit. In this article, waxaan idin ​​bari doonaa shantii codsiyada sare u adeega sidii oo kale ugu wanaagsan ee MOBIledit.
Sida MOBILedit, dhammaan dalabyada ku xusan qodobkan taageeraan tiro balaadhan oo ah telefoonada gacanta iyo OS. Si ka duwan MOBILedit, codsiyadaas Ha la Wadaajin Eebe farrinta ah "la diray by MOBILedit!" qoraalka aad soo diray. Chine waxa kale oo u ogolaan kala iibsiga phone-ka-phone xogta iyo macluumaadka koobiyeynta in Outlook.
1. Wondershare MobileGo for Android bixisaa kale oo lagu kalsoonaan karo si MOBIledit
Wondershare MobileGo ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) taageertaa dhammaan noocyada waaweyn ee qalabka Android ay ka mid yihiin Samsung, Sony, HTC iyo LG oo u baahan cable USB ah ama xiriir Wi-Fi u syncing qalab aad la PC. Waa mid aad u fudud in la isticmaalo iyo waxay maamushaa xog ku saabsan kiniiniga iyo telefoonada. Sidaa daraadeed, kuu soo gudbin karaa, gurmad, celin music, video, sawiro, xiriirada, fariimaha SMS, iyo in ka badan. Waxaa diyaar u ah Windows OS iyo Macintosh, taas oo fursad u wejiyo u isticmaala Android ka dhigaysa. Waxaad u diri kartaa fariimaha qoraalka badan si deg deg ah iyo sidoo kale ka jawaabi taleefan oo ka desktop. Kala beddelashada xiriirada iyo ka Windows Cinwaanka Book, Outlook Express iyo Windows Live Mail sidoo kale waa mid aad u fudud u samayn. Halkan waxa aad u baahan doontaa.
Hayso ah interface user smart iyo saaxiibtinimo.
Mid ka mid ah click in ay gurmad iyo soo celinta xog muhiim ah aad.
Maamul-ada, xiriirada, fariimaha, music, video, sawiro iyo kale oo ku saabsan kaararka SD aad hal meel.
Kabsado lumay xiriirada, fariimaha, barnaamijyadooda, music, video, sawiro iyo ka badan oo ka qalab Android aad. (The version Windows sameeya)
Xogta ka mid phone in kale Transfer loo eegin ay ordaya Android, macruufka iyo Symbian (Nokia). (The version Windows sameeya)
Ma u hagaagsan sawiro la Outlook.
Codsiga MobileGo Wondershare rakib.
Connect qalab aad isticmaalaya cable USB ama Wi-Fi.
Dhoofinta, soo dejinta ama tirtirto barnaamijyadooda, music, SMS, xiriirada iwm adigoo isticmaalaya doorasho u dhigma.
Tag Super Qalabka si aad u hesho muuqaalada saliert dheeraad ah.
si ay u soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda, videos iyo music ka Google Play, YouTube, iyo websites ka badan.
2. MyPhoneExplorer - bedel MOBILedit xusid mudan
MyPhoneExplorer waa la isku halayn karo, oo lacag la'aan ah oo si sahlan loo isticmaalo. Waxaa ku xiri karto aalad Android in computer iyada oo saddex talaabo: cable USB, Wi-Fi oo Bluetooth. Waxaa ka mid ah fursad kale oo kale oo ay ku MOBILedit, taas oo mid ka mid taagan maxaa yeelay waxa kuu ogolaanayaa inaad ma aha oo kaliya aad habayso xogta card SD laakiin waxa ay u hagaagsan la Muuqaalka iyo Thunderbird. Xataa waxaad ka dhoofin karo / qoraalka dejinta (SMS) farriimaha.
Waa fursado syncing freeware oo kala duwan waxaa la bixiyaa sida xiriirada la synced karaa Muuqaalka halka Calendar la Google.
La jaan qaada CHAT SMS, Sifeeyaha files halka syncing.
In uu helo qoraalada badbaadiyey telefoonka.
Bixiya badan oo kala cayn oo kala duwan ah toolbars marka rakibaadda in geeddi-socodka uu noqonayaa mid waqti badan cunta iyo wareer.
Bixiya gurmad iyo soo celiyo doorasho kaliya ee maamulka sawir.
Download MyPhoneExplorer app Client ku saabsan qalabka Android oo MyPhoneExplorer barnaamijka on desktop.
Ka dib markii ay ku rakibidda, bilowdo app macmiilka.
Connect qalab aad PC.
Codsiga waxaa uu socon doonaa ee asalka ah, halka barnaamijka ogaadaa dhammaan xogta.
Waxaad la sida ay keentay in doonaa hawl-dejinta / dhoofinta iyo abaabulo falalka.
3. MOBILedit duwan oo loogu talagalay Samsung Android Devices-- Samsung Kies
Samsung Kies waa astaanta ah ee qalab rasmi ah syncing qalabka ay Android inay kombiyuutarka. Waxa ay taageertaa Windows OS iyo Macintosh iyo shaqaysaa si fiican on qalab kasta oo Samsung, sida taxanaha Galaxy, dukaamada caadiga ah iyo / ama kiniin ah. Waxa si fudud ku wareejinaya xogta u dhexeeya telefoonka iyo computer oo aad u abuuraa gurmad ah. Maaraynta iyo wadaago oo dhan cayn kasta oo ay ku jirto faylasha videos, sawiro iyo maqal ah, liiska xiriirada, diraya / helaya emails via Muuqaalka iyo maaraynta fariimaha qoraalka ah waxaa suurtagal ah iyadoo hal click. Helitaanka iyo ku rakibidda updates firmware fudud u isticmaala Samsung oo ay u cusboonaynta kartaa nidaamka qalliinka qalab ee sidoo kale.
Ka dhig qaybsiga, rakibidda, dhoofinta, soo degida, dhaqaaqin iyo uninstalling ee Chine iyo ka card SD sida ugu fudud ee tirinta 1 ilaa 3.
Waa lacag la'aan ah oo ku faantaa of a interface user weyn.
Kaliya shaqeeyaa qalabka Samsung, halka mararka qaar ay diido in ay xirmaan qalabka Samsung in desktop-ka.
File kala iibsiga hidde u heli gaabinaya waqtiyada.
Interface user ma aha aad u soo jiidasho.
Ku rakib app Samsung Kies on qalab aad.
Isticmaal cable USB ah oo lagu xiro qalabka aad la PC.
Haddii la isticmaalayo codsiga Samsung Kies Air, ka dibna ku xidhi via Wi-Fi.
Burcad app ah oo si toos ah u hagaagsan doonaa qalab aad.
Bilow bedelanaya ama la wadaago.
4. DataPilot ay hubisaa in kala iibsiga xogta ugu dhaqsiyaha badan ay interface toos ah
DataPilot waa tababare app card SD ah oo synchronizes aalad Android la Kundarbetsplats. Waxaa ku qoran ka mid ah fursad kale oo fiican oo dhowr MOBIledit, maxaa yeelay, marka laga reebo xogta si dhakhso ah oo ka computer ka wareejinta iyo in la abuuro files gurmad, waxa ay sidoo kale u ogolaataa user ay u abuuraan interface la ACT !, software Palm, iyo Outlook Express. Dhammaan versions of Windows (Win98 iyo wixii ka sareeya) waxaa taageera DataPilot iyo waxa ay taasi fulinaya dejinta data / dhoofinta mid aad u sahlan. Its Manager tab Buuga retrieves xiriirada effortlessly ka Outlook Express, Palm Desktop iyo MS Outlook. Waxaad si fudud u fiirso karaan dhacdooyinka muhiimka ah jadwalka, ringtones set iyo codadka alarm in MP3, MIDI iyo RTTL qaabab iyo diraan / helaan farriimaha qoraalka ah si toos ah uga desktop-ka. DataPilot bixisaa tafatirka image iyo hawlaha Iyada oo ringtone / wallpaper aad. Editor Image saamaxaya kuwa isticmaala si ay u gudbiyaan, isbedel hal abuur leh oo loo abuuro hayaan sawirada iyo files multimedia. Si aad u xirmaan aad u baahan doontaa inaad awood u Bluetooth ama furaysto in qalab aad via cable USB.
In ka badan laba kun qeybood oo kala duwan ee gmail, waxaa taageera.
Waxay bixisaa updates live lacag la'aan ah ilaa hal sano.
Ku dar ganaya biyo ah sawir kasta.
Mid qalab oo keliya ayaa la beehsa kartaa kombiyuutarka.
Ma version ah freeware kaliya maxkamad la soo bixi karaa, kaas oo sidoo kale uu dhacayo intii toddoba maalmood ah.
Download version maxkamad ka website DataPilot ah.
Ku rakib app ee qalabka Android aad.
Connect qalabka PC.
Ka dib markii la ogaado daaqad idin tusin doonaa dhammaan xogta ay tahay in la wareejiyo.
5. Go wireless dhex AirDroid soo saaristii
Waxaa laga yaabaa in kale oo badan oo ay ku MOBIledit laakiin AirDroid, a app freeware oo caan ah, waa ka duwan yahay, sababtoo ah waxaa kuu ogolaanaya in aad jebiso-xor ah oo xogta u hagaagsan wirelessly. AirDroid taageeraa oo dhan OS waaweyn oo ay ka mid yihiin Linux, Mac iyo Windows. Waxa aad maamuli kartaa xogta aad si fudud u dhex ah web-browser karti ka dib markii is diiwaan website-app ee rasmiga ah. Waxaa si deg deg ah ku rakibtay barnaamijyadooda, kuu ogolaanaysaa inaad guurto iyo share audio / video files iyo qalab widescreen android ah badasha your computer. Interface User waa horyalka Talyaaniga iyo hodan midabyo dhalaalaya. Users samayn kartaa noocyo kala duwan oo falalka deg deg ah ka-browser web sida arkaysid sawirada, degsado audio / video files, diro ama helo fariimaha SMS, download iyo rakibi barnaamijyadooda / uninstall, maareeyaan iyo liiska xiriirada update, iwm AirDroid waa xoog badan iyo app lama filaan ah oo aan la seegay. Waxay u baahan tahay Android version 2.1 ama ka sarreeya.
Waa lacag la'aan ah, ka jawaabaan, lama filaan ah, oo ku faantaa ah interface user soo jiidasho leh.
Bixiya tiro balaadhan oo ah isha web-ku salaysan waxtar leh oo gacanta ku sida Data Counter iyo Maareeyaha a File si buuxda u raran.
The xiriir iyo dajinta hakan doonaa markii qalab aad ayaa galay hab hurdo marka files ka web wareejinta.
Ma u baahan tahay shabakad labada qalabka Android iyo kombiyuutarka.
Download iyo rakibi app AirDroid qalabka Android aad.
Ku rakib ah browser heerarka-waafaqsaneyn sida Mozilla Firefox, Opera iyo Google Chrome.
Isticmaal Local Wireless Network (LAN) ama internet-ka si ay u maareeyaan xogta.